Raha tsy nitady ny hevitro ianao dia tsy tokony nanontany! | Martech Zone
Raha tsy nitady ny hevitro ianao dia tsy tokony nanontany!
Talata, Oktobra 28, 2008 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo zavatra lehibe momba ny zavatra ataoko dia ny mampifandray ahy amin'ireo orinasa hafa niarahako niasa na niaraka tamiko taloha. Androany aho naharay vaovao somary nandiso fanantenana.
Iray volana lasa izay, nandany ora roa aho namenoana fanadihadiana feno izay nalefa tamiko avy amin'ny iray amin'ireo orinasa niasako ary miasa aho izao hampiditra sy hamidy. Namboraka ny tao am-poko ny foko tamin'izaho tao ary mbola tiako ny olony sy ny vokatra ary ny serivisy mandraka androany. Na eo aza izany dia nitohy nipoitra ireo antony nialako tao amin'ilay orinasa rehefa niasa tamin'ny famarotana indray ilay sehatra izahay - interface tsara be, tsy fisian'ny endri-javatra, vidiny lafo sns
Notsipiko tao anaty boaty mailaka ny fanasana fanadihadiana hamaly ny fanadihadiana rehefa afaka manokana ny fotoana aho. Ny harivan'iny sy ny ampitso maraina dia nandany adiny iray na roa aho hamaliana ilay fanadihadiana. Miaraka amin'ny faritra am-peo misokatra dia mivantana aho ary tamin'ny teboka tsikera nataoko. Rehefa dinihina tokoa, amin'ny maha mpivarotra azy dia niditra ny fanatsarana ny vokatr'izy ireo my tombontsoa indrindra. Tsy nisintona totohondry aho ary tena teo alohan'izay tsapako ho olana lehibe. Nentiko ihany koa ny talenta nandao ny orinasa - namoy mpiasa tsara be ry zareo.
Na dia tsy fantatra anarana aza ny fanadihadiana dia fantatro fa misy ny famantarana momba ny fizotran'ny fandefasana ary ny fanamarihana mazava ho ahy dia azon'ny orinasa fantarina fa ahy. Tsy niahiahy momba ny vokany aho, nanontany ny hevitro izy ireo ary tiako hatolotra azy ireo izany.
Amin'ny alàlan'ny voaloboka ankehitriny (misy voaloboka foana), Hitako fa nanakoako tamin'ny alàlan'ny orinasa ny fanamarihako ary raha fintinina, tsy noraisina tsara aho hiara-hiasa amin'ny orinasa hanatsara ny fifandraisana.
Ny valiny, raha ny hevitro, dia tsy mahita lavitra ary tsy matotra. Izay tsy nisy nanatona ahy manokana dia mampiseho tsy fahampiana matihanina ihany koa. Soa ihany ho ahy fa misy mpanome tolotra be dia be eny an-tsena izay afaka manome izay ilaiko vola kely lavitra ary mora ampidirina. Manantena ny hanampy ny orinasako taloha aho amin'ny alàlan'ny fanomezana valiny vaovao sy marina.
Raha tsy nitady ny hevitro izy ireo, dia mba tsy nanontany mihitsy izy ireo. Mety ho namonjy ahy ora vitsivitsy tamin'ny androko io ary tsy nisy naratra na iza na iza. Tsy misy ahiahy anefa. Araka izay tadiavin'izy ireo dia tsy hanao na inona na inona aho mba hampandrosoana ny fifandraisana amin'izy ireo.
Tags: gettinderboxtolo-kevitrafitantanana tolo-kevitrabenchmarks fikarohana
Raiso ny fanamby bilaogy 60 faharoa
28 Okt 2008 amin'ny 3:25 PM
Ny zavatra iray tokony hosaintsainina eto dia ny hoe ofisialy ve sa tsaho fotsiny ny vaovao henonao. Toerana mampihoron-koditra amin'ny fanaparitahana tsaho ny birao, azo inoana fa nivadika fotsiny ireo olona nandinika ny fanolorana nataonao ary nilaza zavatra tsy tokony hataony, ary nisy olona teo akaiky teo nandre izany ary nandray izany ho politika ofisialy. Nivadika ny tsaho avy eo ary niova avy amin'ny raharaha tsotra fihainoana ho zavatra ratsy kokoa.
Mazava ho azy fa tombantombana fotsiny izany 🙂 Mety ho tapaka koa ianao amin'izay orinasa resahinao.
Saingy heveriko fa ny fanontaniana hapetrako amin'ny tenako amin'izao fotoana izao dia - miraharaha ve aho? Raha manana fihetseham-po mangirifiry amin'ity orinasa ity ianao (izay toa anao amin'ny lahatsoratrao), dia tena te hiara-hiasa amin'izy ireo ve ianao?
28 Okt 2008 amin'ny 6:40 PM
Misaotra amin'ny fanehoan-kevitra lehibe, Christian. Tena tsy ho nandefa aho raha nanana fisalasalana momba ny tsaho na ny zava-misy. Tena zava-misy tokoa izany.
Ny lesona ho an'ny orinasa rehetra dia ny hoe, raha tsy vonona ny hahazo valiny tena ratsy ianao dia aza mandefa fanadihadiana izay mangataka izany!
28 Okt 2008 amin'ny 8:48 PM
Inona no lesona nianaranao?
28 Okt 2008 amin'ny 9:25 PM
Ross, mety ho ny fanehoan-kevitra tsara indrindra hatramin'izay. Heveriko fa ny zavatra nianarako dia ny orinasa maro no miantoka ny tsy fivadihana amin'ny dolara fotsiny fa tsy ny mpiasany na ny mpanjifany.
Tsy manana anjara amin'ny orinasa aho ary tsy manana trosa amin'izy ireo, ka tsy tokony horaisiko manokana izany. Ho vitako haingana izany ary hahita orinasa tena te hihaino aho.
29 Okt 2008 amin'ny 2:18 PM
Heveriko fa ny tena olana dia tsy takatry ny orinasa ny lanjan'ny fahazoana valiny mahitsy sy sarotra. Araka ny voalazan'i Doug, raha tsy liana amin'ny fihainoana ny tsara amin'ny ratsy ianao, dia aza manontany olona mety ho marina aminao. Raha toa ka hevitra tsara, miabo, mafana, manjavozavo no tadiavinao. Avy eo safidio tanana ireo mpanjifa/mpanjifa tianao tamberina, antsoy izy ireo ary anontanio hoe "Inona no tianao momba anay?" Fanontaniana iray, dia io, satria raha ny tena izy dia izany ihany no toa tena mahaliana anao ny mandre na izany aza.
Aza hadino ny hoe mety manana mpanjifa mahalala kely momba ny serivisy ezahina hamidy ianao sy ny dikan'ny hoe mampiasa ny fahaizany feno. Ny mpanjifa tsinihinao dia mety ho ilay tena manan-tsaina hahalala izay fanontaniana tokony hapetraky ny mpanjifa rehetra ary tsy izany satria ny 95% amin'izy ireo dia tsy mahalala na inona na inona afa-tsy izay lazainao momba ny serivisyo manokana.
Raha tsy te hanamboatra na hanatsara ny zavatra anananao ianao ary hanatsara izany dia aza mandany ny fotoanay. Betsaka ny tolotra hafa toa ny anao izay azonay atao hoe “ rajako ”.
29 Okt 2008 amin'ny 3:22 PM
Na dia ratsy toy inona aza ny fanehoan-kevitry ny orinasa dia tokony horaisin'ny orinasa ho toy ny fahafahana manatsara izany. Nomenao azy ireo tsara izay nangatahiny dia tokony ho faly izy ireo hahazo izany.
Raha tsapan'izy ireo fa tsy ara-drariny izany, dia tsidiho ny ratsy ary asao ny tsara.
Amin'ny ankapobeny dia fitondran-tena ratsy ny mangataka hevitra tsy mitonona anarana ary avy eo manohitra anao.
Nahoana aho no handroaka olona mivarotra indray ny vokatrao?
29 Okt 2008 amin'ny 4:22 PM
Heveriko fa mitondra olana lehibe kokoa izany. Mila mitandrina ny orinasa amin'izay lazainy momba ny olona tena mavitrika amin'ny media sosialy (toa anao). Mila mitondra ny bilaogera mitovy amin'ny fomba hitondrany mpanao gazety izy ireo. Raha mangataka ny hevitrao izy ireo dia mila mampiasa izany ho fanakianana manorina na tsy miraharaha izany. Ny zavatra ratsy indrindra azon'izy ireo natao dia ny namela azy halefa tao amin'ny blôginao fa nitondra anao toy izany izy ireo. Tsy hita taratra tsara amin'izy ireo mihitsy izany.
29 Okt 2008 amin'ny 5:43 PM
Heveriko fa marina izany, Colin. Azo antoka fa tsy tiako ny olona matahotra ny hanao raharaham-barotra amiko raha sendra misy zava-dratsy mitranga ary mety hibilaogy momba izany aho. Araka ny tsikaritrareo etsy ambony dia tsy milaza mihitsy aho hoe iza io ary tsy hanao izany mihitsy aho.
Ny sasany amin'ireo namako akaiky indrindra dia miasa amin'ny orinasa ary tsy hanandrana hanimba ny orinasan-dry zareo mihitsy aho – fa hanohy hanao ny marina aho rehefa anontaniana.
30 Oktobra 2008 à 12:18
Doug, tena malahelo aho naheno fa nitranga izany. Tena mankasitraka ny valin-teninao aho. Noho ny maha-sarobidy azy - zava-dehibe ny fanehoan-kevitrao ary ankasitrahana izy ireo.
Febroary 15, 2009 amin'ny 4:12 PM
Toy izany koa rehefa misy mametraka fanontaniana, izany hoe "inona no mahasamihafa an'i Indy &. . . . ” Fanontaniana tena nisy tamiko vao haingana. Nisoroka ny valiny aho satria fantatro fa mety hanafintohina ilay manontany izany. Na izany aza, rehefa nanontaniana fanindroany dia namaly aho & azo antoka. . . Hitan'ilay nanontany hoe "manafintohina". Na dia tena zava-misy tanteraka aza ny valiny.
Raha tsy te handre ny valiny isika - amin'ny fanontaniana rehetra - dia aza manontany amin'ny toerana voalohany.